Christian Eriksen Oo Ku Soo Laabanaya Kubada England Xili Loo Diiday Ciyaaraha Italy
HomeHoryaalka IngiriiskaChristian Eriksen oo ku soo laabanaya Kubada England Xili loo diiday Ciyaaraha Italy
October 31, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy 0
Christian Eriksen ayaa laga yaabaa in uu u dhaqaaqo England si uu u sii wato xirfadiisa kubada cagta kadib markii loo diiday fursad uu uga ciyaaro Italy xilli ciyaareedkan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee weerarka ka ciyaara ayaan ciyaarin tan iyo markii uu wadnuhu istaagay intii lagu jiray Euro 2020 markaasoo Denmark ay wajahday Finland bishii June.
Eriksen ayaa isku dayay inuu ku laabto Inter Milan xilli ciyaareedkan, laakiin kooxda Serie A ayaa xaqiijisay inuusan awoodi doonin inuu ciyaaro xilli ciyaareedka 2020-21 maadaama si ku meel gaar ah loogu xannibay sababo caafimaad.
Si kastaba ha ahaatee, ku soo laabashada England waxay u noqon kartaa ikhtiyaarka isaga haddii uu awoodo inuu ku gudbo tijaabooyin gaar ah, taasoo abuurtay shaki ku saabsan mustaqbalkiisa.
Afhayeen u hadlay FA-ga ayaa u sheegay wakaalada wararka ee PA: “Marka la eego Christian Eriksen ka ciyaarista England, suurtagal maaha in laga hadlo xaaladiisa shaqsi iyada oo aan la ogayn xaaladiisa iyo khataraha la xidhiidha. Sida had iyo jeer, qiimayn kasta waxa ay noqon doontaa shaqsiyan.
Eriksen ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu dib ugu soo laabto ciyaaraha xagaaga , mana jiro ciyaaryahan waligiis la ganaaxay sababtoo ah shaashadda wadnaha taasoo siin karta rajo ah inuu soo laabto.